सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ, बे-वास्ता नगर्नुहोला, पूरा पढेर ॐ लेखि सेयर गरौं – live 60media
सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवा स्ता नगर्नुहोला, ॐ लेखि सेयर गरौं!!! ॐ मात्र उच्चारण गर्नु भयो भने पुरा ब्रमाण्ड्को देबि देबताको शक्ति हुन्छ। त्यसैले देखेको 30 सेकेण्ड भित्रमा शेयर गर्नुहोस । ७ दिन भित्रमा तपाइले नसोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवस्ता नगर्नुहोला !!!अन्यथा अनिस्ट हुनेछ बरिस्ठ3जाना पन्डित ले गेरेन्टी दिनु भयो ॐॐॐॐ साथै यो पेज माथी लाइक गर्नु नभुल्नु होला! ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवा स्ता नगर्नुहोला, ॐ लेखि सेयर गरौं!!! ॐ मात्र उच्चारण गर्नु भयो भने पुरा ब्रमाण्ड्को देबि देबताको शक्ति हुन्छ।
त्यसैले देखेको 30 सेकेण्ड भित्रमा शेयर गर्नुहोस । ७ दिन भित्रमा तपाइले नसोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवस्ता नगर्नुहोला !!!अन्यथा अनिस्ट हुनेछ बरिस्ठ3जाना पन्डित ले गेरेन्टी दिनु भयो ॐॐॐॐ साथै यो पेज माथी लाइक गर्नु नभुल्नु होला! सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवा स्ता नगर्नुहोला, ॐ लेखि सेयर गरौं!!! ॐ मात्र उच्चारण गर्नु भयो भने पुरा ब्रमाण्ड्को देबि देबताको शक्ति हुन्छ। त्यसैले देखेको 30 सेकेण्ड भित्रमा शेयर गर्नुहोस । ७ दिन भित्रमा तपाइले नसोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवस्ता नगर्नुहोला !!!अन्यथा अनिस्ट हुनेछ बरिस्ठ3जाना पन्डित ले गेरेन्टी दिनु भयो ॐॐॐॐ साथै यो पेज माथी लाइक गर्नु नभुल्नु होला! सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवा स्ता नगर्नुहोला, ॐ लेखि सेयर गरौं!!!
ॐ मात्र उच्चारण गर्नु भयो भने पुरा ब्रमाण्ड्को देबि देबताको शक्ति हुन्छ। त्यसैले देखेको 30 सेकेण्ड भित्रमा शेयर गर्नुहोस । ७ दिन भित्रमा तपाइले नसोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवस्ता नगर्नुहोला !!!अन्यथा अनिस्ट हुनेछ बरिस्ठ3जाना पन्डित ले गेरेन्टी दिनु भयो ॐॐॐॐ साथै यो पेज माथी लाइक गर्नु नभुल्नु होला! सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवा स्ता नगर्नुहोला, ॐ लेखि सेयर गरौं!!! ॐ मात्र उच्चारण गर्नु भयो भने पुरा ब्रमाण्ड्को देबि देबताको शक्ति हुन्छ। त्यसैले देखेको 30 सेकेण्ड भित्रमा शेयर गर्नुहोस ।
७ दिन भित्रमा तपाइले नसोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवस्ता नगर्नुहोला !!!अन्यथा अनिस्ट हुनेछ बरिस्ठ3जाना पन्डित ले गेरेन्टी दिनु भयो ॐॐॐॐ साथै यो पेज माथी लाइक गर्नु नभुल्नु होला! सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवा स्ता नगर्नुहोला, ॐ लेखि सेयर गरौं!!! ॐ मात्र उच्चारण गर्नु भयो भने पुरा ब्रमाण्ड्को देबि देबताको शक्ति हुन्छ। त्यसैले देखेको 30 सेकेण्ड भित्रमा शेयर गर्नुहोस । ७ दिन भित्रमा तपाइले नसोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवस्ता नगर्नुहोला !!!अन्यथा अनिस्ट हुनेछ बरिस्ठ3जाना पन्डित ले गेरेन्टी दिनु भयो ॐॐॐॐ साथै यो पेज माथी लाइक गर्नु नभुल्नु होला!
← पतिसँग छुटाएर नव विवाहितालाई मलमासमा किन माइत पठाइन्छ?
४ वर्षकी शितलको आमाको स्नेह, आमाको भूमिका निभाउदै, सुत्केरी आमा बितेको थाहै नपाएकी शितलको डेरापुग्दा चल्यो रु’वावा’सी (भिडियो सहित) →